Sidee Labada Sami ee iPhone XS iyo XS Max cusub u shaqeeyaan | Wararka IPhone
Luis Padilla | | iPhone Xs, Casharrada iyo buugaagta
Waa mid ka mid ah riwaayadaha waaweyn ee iPhone XS iyo XS Max. Ugu dambeyntiina, sanado badan ka dib warar xan ah oo ku saabsan, Apple waxay soo saartay iPhone-keeda iyada oo leh xulashada Dual SIMIn kasta oo ay u sameyso si ka duwan noocyada kale, iyo halkii ay ku heli laheyd labo saxaaradood oo la dhigo laba kaar, waxay dooraneysaa kaliya kaar jireed (nanoSIM sidii caadiga ahayd) iyo eSIM.
Waa maxay eSIM? Sideen ku heli karnaa labo nambar taleefankeena? Sideen uga tagi karnaa lambar ilaa lambar kale? Shaqooyin noocee ah ayaan u isticmaali karnaa lambar kasta? Waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay inaad ka ogaato xagga hoose.
1 Waa maxay eSIM?
2 Faa'iidooyinka eSIM
3 IPhone Dual SIM ah
4 Maxaan ubaahanahay inaan ku isticmaalo eSIM iPhone
5 Lambarkee ayaan ka soo wacayaa
6 Sideen ku heli karaa wicitaano?
7 Ka waran xogta moobiilka?
8 Sideen ku arkaa caymiska la heli karo?
9 Sidoo kale iPhone XR
Waa maxay eSIM?
Dhamaanteen waan ognahay kaarka SIM-ka ee mobilka gacanta, kaas oo cabir ahaan loo yareeyay nanoSIM-yada hada jira oo ficil ahaan dhamaan taleefannada casriga ee suuqa yaala horay u haysteen. Dadaal lagu doonayo in lagu sii yareeyo cabbirka aaladaha, warshaduhu waxay u boodboodeen eSIM, taas oo aan ka badnayn Chip-ka SIM-ga oo aan lahayn waxyaalo kale oo qurxin ah oo lagu xardhay boosteejada, iyadoon suurtagal ahayn in la beddelo. Tani waxay si weyn u yareyneysaa booska la degay iyada oo aan loo baahnayn saxaarad ama Pius si loo akhriyo jajabka, maxaa yeelay wax walba ayaa ku dhex jira qalabka.
IPhone-kani ma aha telefoonnadii ugu horreeyay ee haysta eSIM, sida had iyo jeer dhacda, laakiin maadaama ay iyagu leeyihiin, waxaan hubnaa inaan wax badan ka maqli doonno tikniyoolajiyadan, hawlwadeenaduna way u boodi doonaan inay la qabsadaan, maxaa yeelay illaa iyo hadda waxay ahayd wax ku dhow sheeko xaddidan oo ku kooban dhowr qalab oo iswaafaqsan. Xaqiiqdii, Vodafone iyo Orange waxay horeyba ugu dhawaaqeen iswaafajin Spain iyo wadamo kale hawlwadeeno badan ayaa sidoo kale qaaday talaabada dhanka teknolojiyadan.
Marka lagu daro yareynta cabbirka iyo baabi'inta qaybaha dhaqdhaqaaqa ee taleefannada casriga ah, oo had iyo jeer u fiican cidhiidhiga aaladda, eSIM waxay leedahay faa'iidooyin kale oo badan, oo ay ku jiraan suurtagalnimada in laga beddelo hal lambar oo kale iyada oo aan loo baahnayn in laga saaro kaar kasta, kaliya laga helo goobaha qalabkeena. Tan macnaheedu waxa weeye waxaad yeelan kartaa dhowr khad oo lagu rakibay terminalkaaga oo aad isticmaali kartaa midka adiga kugu habboon xaalad kasta maxaa yeelay isku beddelka midka kale waa arrin ilbidhiqsiyo ah.
Caqabado ayaa sidoo kale la bixiyaa, maadaama aadan u baahnayn kaarka SIM-ga shirkadaada cusub, isbedeladana waxay noqon karaan kuwo deg deg ah, adigoon dhowr saacadood joogin (ama maalmo) taleefan la'aan maxaa yeelay khadka cusub wali lama howl galin Iyagu waa laba tusaale oo badan oo kuwa badan ah oo aan dhigi karno, maxaa yeelay eSIM waxay u leedahay oo keliya faa iidooyin isticmaaleha, ugu dambeyntiina waxay u muuqataa inay halkan joogto.
IPhone Dual SIM ah
Apple waxay soo bandhigtay iphone-keeda cusub, mid ka mid ah sheeko cusub ayaa si sax ah u dhacday tan. Illaa iyo hadda, Dual taleefannada SIM-ku waxay lahaayeen laba saxaarad (ama labo-jibbaar) in la dhigo labada kaar ee jirka. Qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad u isticmaasho labada sadar cod ahaan, kuwa kalena hal cod oo midna xogta, ama hal khad oo keliya oo aad gacanta ugu kala beddesho mid kale. Apple waxay dooratay kaliya nanoSIM jireed, oo leh saxankeeda caadiga ah, iyo eSIM. Haddii aadan qorsheyneynin inaad isticmaasho eSIM, ma ogaan doontid wax cusub, maxaa yeelay wax waliba waa sidii hore.
Maxaad ku mahadsantahay muuqaalkan cusub? Waxaad kuheli kartaa ipadkaaga laba khad taleefan, mid wicitaanada shaqsiga ah iyo midka kale ee wicitaanada shaqada. Riyadii inbadan ayaa ugu dambayntii rumowday mana u baahan doonaan inay sii wataan laba taleefan dambe. Ama waxaad kuheli kartaa hal layn cod iyo mid kale oo xog ah, adoo ka faa'iideysanaya sicirka ugu fiican suuqa ama midka bixiya Gigas-ka ugu badan ee xogta. Mar dambe laguguma xidhi doono sicirka codka qaaliga ah maxaa yeelay waxay ku siinaysaa xog badan oo aad ku qarashgareyso. Ama waxaad u beddeli kartaa cod maxalli ah ama xaddiga xogta ah markaad u baxdo dibadda, adigoon bixin lambarkaagii caadiga ahaa.
Maxaan ubaahanahay inaan ku isticmaalo eSIM iPhone
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay waa, marka lagu daro iPhone-kaaga XS ama XS Max, waa in hawlwadeenkaagu la jaan qaadi karo. Waqtigan xaadirka ah Spain, kaliya Vodafone iyo Orange ayaa ah, ama halkii, waxay noqon doonaan maxaa yeelay wali qandaraas kuma lihi kartid. Adeeggan eSIM wuxuu leeyahay qiimo kala duwanaan doona iyadoo kuxiran heerka aad qaadatay, laakiin marka la soo koobo waxaan dhihi karnaa qiimaha ugu qaalisan waxaa ka mid ah lambar eSIM oo bilaash ah, sicirka kalena waxay leeyihiin qiimo of 5.
Waqtigan xaadirka ah suurtagal maaha in qandaraas la siiyo oo keliya eSIM, waa inaad haysataa khad "caadi ah" oo leh 'Sim'-gaaga jirka ah, waxaad heshayna waa khadad dheeri ah oo leh eSIM adoo adeegsanaya isla lambarkaas aad ku habeyn kartid qalabkaaga. Si aad u fahanto, haddii aad rabto inaad u isticmaasho khadkaaga shaqadaada iPhone-gaaga shaqsiga ah, waa inaad kireysaa eSIM safka shaqada, ka tag SIM-ka guriga oo ku dheji eSIM-kaaga iPhone-ka, kaas oo sidoo kale yeelan doona SIM-ga shakhsiga ah ee lagu dhex rido saxaaraddiisa.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad u baahan doontaa dalabka wadahaaga oo lagu rakibo iPhone-kaaga, ama lambarka QR ee shirkaddaada ku siineyso. Tag «Settings> Macluumaadka moobaylka> Ku dar qorshaha xogta moobiilka» oo iskaan lambarka QR ee bixiyahaagu ku siiyay. Si aad u dhaqaajiso, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in laga furo barnaamijkaaga hawl wadeenkaaga taleefankaaga iPhone-ka. Sidan ayaad ku dari kartaa qorshooyin badan sida aad rabto iyada oo loo marayo eSIM, laakiin waxaad kaliya isticmaali kartaa midkood, adoo gacanta ugu badalaya mid kale oo isla goobahaas ah.
Tallaabada ugu dambeysa waa inaad magacawdaa sadar walba si aad u garatid markasta oo aad rabto inaad beddesho, oo aad doorato waxaad rabto khadkaaga caadiga ah inuu noqdo iyo isticmaalka aad rabto inaad ku siiso khadka kale. Waa inaad maskaxda ku haysaa in labada khadood ee moobaylku ay awoodi doonaan inay helaan oo wicitaano sameeyaan, SMS iyo MMS, isku mar, laakiin mid uun baa loo isticmaali karaa shabakad xogeed. Marka xulashooyinka ay Apple ku siineyso waa:
U adeegso hal khad sida shabakadda aasaasiga ah ee leh dhammaan howlaha iyo shabakadda labaad oo keliya taleefanka iyo SMS
U istcimaal hal khad sida shabakadda ugu weyn ee wicitaannada iyo SMS-ka iyo kan kale oo keliya sida shabakadda xogta.
Lambarkee ayaan ka soo wacayaa
Adoo u malaynaya inaad qaybisay labada khad ee wicitaanada iyo SMS, lambarkee ayaad ka soo wici doontaa wicitaanada? Uma baahnid inaad khadadka ka beddesho saddexdiiba saddexdii, ilaa markii aad wacdo xiriir waxaad had iyo jeer adeegsan doontaa xariijintii ugu dambeysay ee aad ku isticmaashay xiriirkaas. Haddii aadan weligaa wicin, waxay u adeegsan doontaa xariiqa aad u qaabeysay shabakadda ugu weyn.
Waad beddeli kartaa lambarka aad rabto inaad uga wacdo xiriir kasta, ama codsiga taleefanka laftiisa waxaad ka dooran kartaa layn ka duwan kan markii hore loo isticmaalo. Waxaad sidoo kale ka sameyn kartaa arjiga farriimaha inaad farriin uga dirto lambar kale oo aan ahayn kii ay iPhone ku xulatay markii hore.
Marka laga hadlayo iMessage iyo FaceTime, ma awoodi doontid inaad labada xarimoodba isku mar adeegsato, sidaa darteed goobaha qalabka waa inaad ka doorataa midka aad rabto inaad ku isticmaasho adeegyadan Apple haddii aadan rabin inaad sii haysato midka lagu soo xulay asal ahaan.
Sideen ku heli karaa wicitaano?
Haddii aad u qaabeysay labada khad ee wicitaannada, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho labada lambar midkood adigoon waxba qaban, uma baahnid inaad midba midka kale u beddesho. Dabcan, haddii aad ku mashquulsan tahay xariiq wicitaan oo ay kuugu yeerayaan khadka kale, waxay si toos ah ugu dhaceysaa farriinta codka, laakiin laguma soo ogeysiin doono wicitaanno kasta oo ku seegga lambarka labaad, faahfaahin ah inaad tixgeliso.
Ka waran xogta moobiilka?
Waxaad isticmaali kartaa oo kaliya hal xariiq oo xogta moobiilka ah xitaa haddii labada sadar ee aad qaabeysay ay iyagu leeyihiin. Haddii aad rabto inaad beddesho sadarka aad u isticmaaleyso xogta moobiilka, waxaad aadi kartaa "Settings> Mobile data" oo dooro lambarka aad rabto inaad u isticmaasho shaqadan. Waa isku mid haddii aad rabto inaad ku kaydiso ikhtiyaar kasta hababka qalabka. Sidoo kale waa inaad ogaataa in haddii lagaa soo wacayo lambarka aan lahayn xogta moobiilka ee firfircoon, iPhone-kaaga ma lahan internet inta lagu jiro wicitaankaas, maxaa yeelay lambarka kale waa la "furi doonaa" muddadaas.
Sideen ku arkaa caymiska la heli karo?
Haddii aad eegto sawirrada maqaalkan waxaad ku arki doontaa midigta, xagga sare, daboolku wuxuu u muuqdaa laba astaamood: baararka kore ee caadiga ah iyo xariiq dhibco ah oo hoose. Sidan ayaad ku ogaan doontaa caymiska mid kasta oo ka mid ah labada sadar. Haddii aad rabto inaad aragto faahfaahin dheeri ah, waxaad soo bandhigi kartaa Xarunta Koontaroolka bidix ee kore waxaad ku arki doontaa baararka daboolka oo ay ku qoran yihiin magaca labada hawl wadeen ee aad adeegsanayso, xitaa haddii ay isku mid yihiin.
Sidoo kale iPhone XR
IPhone XR, waa nooca ugu jaban ee Apple soo bandhigtay laakiin taasi waxay qaadan doontaa wax yar ka dheer in la yimaado, Waxaad sidoo kale leedahay suurtogalnimada inaad ku isticmaasho Dual SIM illaa eSIM. Waxaan u maleyneynaa in hawlgalku isku mid noqon doono, laakiin hagahan wuxuu ku saleysan yahay macluumaadka laga helo Apple wuxuuna kaliya tixraacayaa XS iyo XS Max, sidaa darteed waxaan sugeynaa macluumaad dheeri ah ka hor inta aan lagu darin XR qodobkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone Xs » Sidee Dual SIM-ka cusub ee iPhone XS iyo XS Max u shaqeeyaa
Waxaan qiyaasayaa halka ay ku qoran tahay "Odds sidoo kale waa la siiyaa" waxaa loola jeedaa "qaadi karo" sax?
Qoorta Gonzalo dijo
Faahfaahinta ayaa ah, maxaa dhici doona haddii labada sadarba aan u baahdo inaan isticmaalo WhatsApp?
Jawaab Gonzalo Cuello
Wixii WhatsApp ah waa in la cusbooneysiiyaa oo loo oggolaadaa laba lambar isla app
Miyay hawlgalka laga jari karaa waqti ka mid ah si aan wicitaano loogu helin wakhti cayiman?
Jawaab Juan A. Diaz
Kani waa fiidiyowga kooban ee Apple ee kooban ee Keynote
Maxay ku kala duwan yihiin iPhone XS iyo iPhone XR